vCard faịlụ bụ ihe bụ isi nke kọntaktị na a zọpụta jidesie kọmputa dị ka ọ bụ a format raara nye kọntaktị nchekwa na kọmputa. N'ime oge ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na dị iche iche usoro e mepụtara na nwekwara vasatail na ọdịdị ka obi sie na vCard faịlụ na-agafere dị iche iche na ekwentị mkpanaaka teknụzụ gụnyere iOS, Android na ọbụna S60 Nokia ngwaọrụ. A nkuzi bụ ihe niile banyere ebufe vCard ma ọ bụ kọntaktị faịlụ ka iPad ma ọ bụ iPhone iji jide n'aka na ha na-tinye n'ọrụ na a n'ụzọ onye ọrụ na-achọ enweghị ihe ọ bụla nke ma ọ bụ nsogbu.
Part1: Olee otú Email vCard faịlụ ka iPhone
Part2: Olee imeghe vCard faịlụ na iPhone ma ọ bụ iPad
Part3: Họrọ ụfọdụ kọntaktị si VCF faịlụ na Mbupụ na iPhone
Part4: Olee nyefee na TunesGo Ochie
Part5: Rịba ama & Iji Download TunesGo Ochie
Emailing kọntaktị na iPhone bụ eleghị anya ndị kasị mma na ndị kacha usoro iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu a onye ọrụ dị ka wụnye na mpụga software omume na nbudata na utilities na na-metụtara nke atọ. Ọ na-eme n'aka na faịlụ na-abụghị nanị kpọfere iPhone Ma iji na ọdịnaya nakwa ịnọgide na otu ihe ahụ.
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iCloud na-tapped n'ime ntọala nke iPhone:
ii. Taabụ megide kọntaktị a ga-tụgharịa na iji nweta na-esote na ihuenyo:
III. www.icloud.com bụ na-gara na mkpa nkọwa ndị ga-enye nbanye na software:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa kọntaktị:
v. The cog icon bụ mgbe ahụ na-tapped iji jide n'aka na menu egosi na iji jide n'aka na kọntaktị na-exported na kọmputa na ụdị nke vCard:
Part 2. Olee imeghe vCard faịlụ na iPhone ma ọ bụ iPad
vi. Ozugbo vCard faịlụ a na-echekwa na na usoro onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na Gmail ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọrụ email na-eji Email na vCard faịlụ ka chọrọ adreesị ozi-e ahụ bụ a ga-emeghe na lekwasịrị ngwaọrụ. The email ga-apụta dị ka ndị a:
VII. Ozugbo vCard faịlụ a tapped ndị na-esonụ menu ga-apụta na nke a kwa na-agwụ usoro nke otú a onye ọrụ nwere ike imeghe a vCard faịlụ na iPhone ma ọ bụ iPad:
Part 3. Họrọ ụfọdụ kọntaktị si VCF faịlụ na Mbupụ na iPhone
Na ndị ọzọ okwu, ọ pụkwara na-akpọ ka edezi VCF faịlụ ka dakọtara mkpa nke onye ọrụ. Iji jide n'aka na needful na-eme na kasị mma n'ụzọ ọ na-gwara na-eso usoro na e kwuru n'okpuru iji nweta nsonaazụ na akara na gị chọrọ:
m. Onye ọrụ mbụ kwesịrị ibudata vCard ka XLS ịba uru ọ bụla na weebụsaịtị dị ka e nwere ọtụtụ iri puku ndị ha:
ii. Ozugbo ọ e mere na faịlụ a bụ a ga-emeghe:
III. The onye ọrụ nwere na-eso kpaliri iji emeghe faịlụ n'ụzọ ziri ezi:
too ogologo. Faịlụ a bụ na-enyocha na-edekwa nke mere na ọ bụ nanị ndị na kọntaktị nke iPhone na-gụnyere na onye ọrụ kwesịrị:
v. Onye ọrụ na onye ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ụzọ faịlụ menu> bupu-agbaso. Onye ọrụ dịkwa mkpa iji jide n'aka na faịlụ a renamed na faịlụ ụdị na-agbanwekwa "CSV (rikoma delimited)".
vi. Iji email ụkpụrụ na e kọwara n'elu onye ọrụ nwere ike mgbe ahụ nyefee dezie faịlụ ka iPhone na enyemaka nke email. The kọntaktị nwere ike mgbe ahụ ga-emeghe anya dị ka kwa usoro nke e kwuru ná mmalite nke a nkuzi.
Part 4.How nyefee na TunesGo Ochie
Ọ bụ ịrụ ụka adịghị otu nke kasị mma software omume na e mepụtara site Wondershare iji jide n'aka na kọntaktị na-dị si iPhone ka PC na Mac na na-dị ka iPhone si PC na Mac. E nwere ọtụtụ uru nke na-eji a dị oke egwu tech mpempe na ụfọdụ n'ime uru ndị dị ka ndị:
Ọ nwere ike na nyefee ruo 90,000+ kọntaktsị na otu laa.
Ọ chọtara na deletes oyiri kọntaktị onwe ya.
Ọ na-eme n'aka na nyefe na mere ụdị batches nke ọ bụghị nanị azọpụta oge kamakwa mgbalị nke onye ọrụ.
The software e wuru na otu nhọrọ nke free ikpe nke mere na ndị ọrụ nwere ike ahọrọ na-aga n'ihi na ụgwọ mbipute mgbe ha na-enwe nnọọ afọ ojuju na nke a.
Tụkwasị na nke ọhụrụ kọntaktị site na PC bụghị ihe nke mgbe nile.
The GUI ma ọ bụ onyeōzi ọrụ interface na-eme ka n'aka na ojiji bụ enyi na enyi na mfe.
Iji nweta ihe kasị mma nke a software ojiji ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a replicated na onye ọrụ onwe PC ma ọ bụ Mac mere na-arụpụta na-na akara na mkpa na-achọ n'aka:
m. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe omume na-ibudatara na URL http://www.wondershare.com/ios-manager/ nke bụ ukara Wondershare website. The interface bụ dị ka ndị a:
ii. The iPhone a na-ahụ na-jikọọ na PC site eriri USB:
III. The software ga-akpaghị aka ịchọpụta na ngwaọrụ na ga-egosipụta na nchekwa nakwa dị ka faịlụ na-ugbu na ebe nchekwa dị ka ọ ga ike iṅomi ya:
too ogologo. Pịa kọntaktị na ekpe mmanya nke software omume na mgbe ahụ ihe ọhụrụ na n'elu ụlọ mmanya:
v. The kọntaktị na na-kwukwara n'ụzọ dị otú a ga-kpọmkwem echekwara na iDevice na-akpaghị aka na ya mere usoro okokụre ebe a.
Part 5. Cheta & Iji Download TunesGo Ochie
Usoro na e kwuru ebe a nwere ike ga-eji na niile iDevices ka ha niile na-akwado iOS na e mepụtara site na iji otu teminoloji. Iji mee ka usoro mfe ọ na-gwara mgbe ite egwú ọ bụla nzọụkwụ ọ bụla na usoro nke e kwuru ebe a dị ka ọ ga na-ahụ na-arụpụta na-enwetara na a ibu ngwa-ngwa ụzọ na dị ka uche na ọchịchọ nke onye ọrụ onye na-arụ ha . The ụzọ dị nnọọ mfe iso ma ka zere ihe ọ bụla nsogbu ọ na-atụ aro na-a pro ndụmọdụ zere ihe ọ bụla mgbaka.
PhoneClean Alternative: Olee otú ọcha gị iPhone na 1-click
> Resource> iPhone> Olee mbubata / nyefee gị vCard faịlụ ka iPhone ma ọ bụ iPad Mfe